Oganda: Blogren na literatioram-bolongana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2009 16:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Iray amin’ireo mpanoratra betsaka ao anatin’ny blogren I Carsozy . Ny andian-tantarany, antsoina hoe The Devil's Bonfire (Ny afoben'ny Devoly), no tantara misy an’I Simon Katende, ilay zatovo Kampalana nipetraka tao an-drenivohitra, namangy ny Raibeny ary avy eo nafangaron’ny toe-javatra izay tsy mbola fantany akory.
Mamaham-bolongana andian-tantara ihany koa i Jon Gosier, olona Amerikana iray sy miasa ao Oganda. Tantara anganoangano Afrikana izay ao anatin’ny andiany faharoa i Muxtionary . Toy izao no entin’I Jon ampahafantarana azy:
Ireo izay maniry ny hamaky ny haisoratr’izy ireo voafintina, dia nandefa Blaogy matetika i Gay Uganda izay noforonina avy tamin’ny alalan'ny fiainany andavan’andro